Mpanamboatra seramika vita amin'ny ceramic quartz tsara indrindra | SICER
Ny keramika quartz dia manana fahombiazana mahatohitra fanoherana hafanana tena tsara noho ny fanatsarana ny famoronana voa. Ny keramika quartz dia manana coefficient kely amin'ny fanitarana hafanana, fitoniana simika tsara ary fanoherana ny harafesin'ny vera.
Temperature miasa ≤1650 ℃
endrika Kianja, Sodina, sns
Alumina dia karazan-keramika vita amin'ny seramika izay manana fifehezana hafanana avo, fanoherana avo lenta, tanjaka mamoritra, fanoherana ny hafanana avo ary fanoherana ny fahatairana mafana. Izy io koa dia fitaovana suitalbe ho an'ny fampiasana lafaoro ao anaty vilany, izay ambany ny vidiny raha ampitahaina amin'ny refraktera hafa.
Misy karazany roa ny fitaovana ho an'ny SICER Crucible, Alumina ary Zirconia.
Miaraka amin'ny fanoherana tsara ny fikorontanan'ny hafanana, ny harafesina ary ny coefficient amin'ny fanitarana hafanana, dia ampiharina betsaka amin'ny fizotry ny fandrendahana.
Ny tsiranoka Alumina dia misy fanoherana asidra sy alkaly tsara ary mety amin'ny alikaola sy vy tsy misy fangarony. Ny mari-pana miasa farany ambony dia mety hahatratra 1600 ℃
Zirconia Crucible dia mahazaka fanoherana asidra, ary be mpampiasa amin'ny famoahana metaly super sy ny metaly mendri-kaja, ary ny mari-pana miasa dia hatramin'ny 1980 ka hatramin'ny 2100.
Ny vano vita amin'ny oksida aluminium dia be mpampiasa amin'ny fampiharana manaraka:
Nampiasaina tamin'ny fanaovana ampahany ho an'ny CVD, implant ion, photolithography, ary ampahany semiconductor.
Nampiasaina ho an'ny lafaoro ho an'ny indostrian'ny metallurgy noho ny fahaizany manompo ao anatin'ny mari-pana ambony.
Natao ho mpiaro ny mpivady mafana mafana.
Ampiasaina amin'ny indostrian'ny simika misy fanoherana mahery vaika.
• Fanitarana hafanana ambany
• Milamina tsara ny simika
• Hakitroky ambany ambany
• Ny fanoherana ny harafesin'ny vera
• Ny poria kely sy ny endrika tsara dia manatsara ny fahadiovana
• Hery mahery mekanika ary mitafy fanoherana
• Fanoherana simika tsara ny asidra sy ny hafa
• Fanaraha-maso dimensional tsy tapaka
Teo aloha: Corundum-mullite Chute
Manaraka: Sicer - Liner vita amin'ny ceramic ho an'ny paompy fotaka